Pick Ax, oo loo adeegsaday dhirta. Pickaxe maalmahan sida caadiga ah wuxuu leeyahay laba daraf. Dhamaadka fiiqan waxaa loo isticmaalaa dusha dhagaxa ama shubka. Dhamaadka labaad waa mid fidsan oo inta badan loo isticmaalo xoqidda. Iyada oo leh madax culus oo culus iyo barta xiriirka ee yar ee caarada madaxa, qalabku wuxuu noqonayaa aalad aad wax ku ool u ah oogada, dhagaxa, iyo meelaha la taaban karo.
Gemlight Pickaxe qalabka ugu weyn waa kaarboon sare Shiinaha # 45 bir. Caadi ahaan waxaan isticmaalnaa birta tareenka duugga ah. Dhamaan pickaxe waa jirka pickaxe buuxa oo kululeeya loona rogay qaab qaadasho iyo qaab faas ah. Dhamaan Pickaxe waa midab buufin. Adaguna waa HRC42-52. Adag iyo adkeyn labadaba taas oo kadhigi karta pickaxe isticmaalka waqti dheer. Gemelight pickaxe waa mid waara oo tayo sare leh si loo hubiyo inuu awood u yeelan doono u adkeysiga saameynta taabashada dusha sare iyo dhagaxyada.
Dhulbeereyaasha, beeraleyda iyo xitaa macdan qodayaasha, Gemlight pick ax wuxuu ka caawiyaa inay shaqadooda ku qabtaan dhib la'aan. Haddii aad sidoo kale raadineyso faashash soo iib ah, kaliya iska hubi xulashada alaabadayada kor ku xusan.
Summad Gemlight ama B-digaag Heesta Gus Model P401
Summad Gemlight Ama OEM / ODM Waxyaabaha Kaarboonka sare ee birta Rail Way
Miisaanka 5LB 5.5LB Hoe Baalash Daaweynta kuleylka kuleylka buuxa
Nooca Blade Forge Shaqooyin culus hal gabal been abuur ah Adag Pickaxe Blade HRC32-42
Oogada Pickaxe Saliida Anti-miridhku dahaarka leh, iyo midab rinji ah. Midabka Pickaxe Blade Jirka madow, oo madaxa la dhalaalay
Nooca Indhaha Pickaxe Wareega Wareega 6 # Qaabka Blade Conical iyo mid kale waa cirib dhuuban
Qabashada Waxaa laga helaa Woodcm Beech 90cm Ballaaran Edge Dahabka dharka si loo gooyo geeska
Wadanka asalka Shiinaha
P404The Tareenka Xulista Axe
P406 Mattock Xulo
P410 Tareenka Xulista Tareenka
Tirada 12PCS / CARTON
Hore: Forded Hoe
Xiga: Mindi Machete
Pickaxe been abuur ah